प्रधानमन्त्री रोजगार कि कर दोहन ?
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पछिल्ला क्रियाकलाप हे र्दा उपलब्धिशून्य अवस्था दे खिन्छ । वै दे शिक रोजगारीको क्षे त्र नयाँ स र कार गठन सँगै अस्तव्यस्त भइर हे को छ र यस ले अझै लय स मात्न स के को छै न भने आन्तरि क रोजगारीको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय छ । यतिमात्र हो इन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाउँमा जनताले गाँस काटे र तिरेको कर को चर म दुरुपयो ग भइर हे को छ । दुर्भाग्यवश श्रम मन्त्रालयको ने तृत्व गनेर् मन्त्री र उच्च अधिकारीहरु यस लाई विश्वकै नमूना कार्यक्रमको संज्ञा दिइर हे का छन् ।
एफडीआई प्रवाहमा देखिएको अन्तर
उद्योग विभागमा विगत केही वर्षयता दर्ता भइरहेका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धताका उद्योगहरूको संख्या हेर्ने हो भने लगातार बढ्दै गइरहेको देखिन्छ, तर यही तथ्यांकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणसँग दाँजेर हेर्दे हो भने यो अनुपात निराशाजनक देखिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा नेपालमा कुल २ खर्ब ४६ अर्ब ४६ करोड लगानी प्रतिबद्धतासहित उद्योग दर्ता भए पनि उक्त वर्ष जम्मा १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबराको वैदेशिक लगानी प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ ।
सहकारीलाई ब्याजमा सीमा
विगत केही वर्षयता नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले समानान्तर बैंकिङको कारोबार गर्दै आएको कुरालाई स्वयं नियामक निकायहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । सहकारीमा कारोबार बढ्नुका पछाडि दुईटा कारण छन्, पहिलो सहज र सहल कारोबार भएकाले साना निक्षेपकर्ताहरू यस्ता संस्थामा आकर्षित भए ।
पर्यटनमन्त्रीका अवसर र चुनौती
वायुसेवा निगमको साधनस्रोत उपयोग गर्दै सस्तोमा प्याकेज ल्याएर निगमलाई ऋणबाट उतार्ने र भ्रमण वर्ष २०२० पनि सफल बनाउने अवसर मन्त्री भट्टराईलाई छ ।
बैंकले नाफामात्रै हेर्ने कि सेवा पनि ?
औपचारिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको संकेत अन्य सूचकहरूले नदेखाए पनि देशको बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक नाफाको आकारले विगत केही समययता सबैको ध्यान खिचेको छ ।
उच्च व्यापारघाटाले बढाएको चिन्ता
भन्सार विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बाह्य व्यापारको तथ्यांकले कहालीलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल १४ खर्ब १८ अर्बको आयात हुँदा मुलुकले जम्मा ९७ अर्बको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । देशको निर्यात डालो नै कमजोर रहँदा व्यापारघाटाको आयातन पनि १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा मुस्किलले १० खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो ।
रेलमार्ग र जलमार्ग कुरेरै बस्ने ?
मुलुकमा हरेक वर्ष साउनको दोस्रो सातादेखि व्यापारघाटाको विषयमा निकै चर्चा हुन्छ । कतिले चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन् भने कतिपयले मुलुक असफल राष्ट्र (फेलियर स्टेट) बन्न लागेको चेतावनी पनि दिइरहेका हुन्छन् । साउन दोस्रो सातादेखि भन्सार विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । यी तीन निकायमध्ये भन्सार विभागले पहिलो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ९७ अर्ब बराबरका सामान निर्यात गरेर १४ खर्ब १८ अर्ब बराबरका सामान आयात गरेको जनाएको छ भने यससँगै मुलुकको कुल व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ ।
हवाई सहमतिले बढाएको आशा
सन् १९९० को दशकसम्म विश्व अर्थतन्त्रको मूलधारबाट केही अलग बसेर आफ्नो अर्थतन्त्रको विकासमा एक मुलुक दुई नीतिको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेको चीन अहिले प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति क्षमता (पीपीपी) का आधारमा विश्वकै पहिलो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का प्रवाहका दृष्टिले चीन गन्तव्य र स्रोत मुलुक दुवै रूपमा नै अग्रणी स्थानमा छ । त्यसैले विश्व अर्थ–राजनीतिमा चीनको भूमिकालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन ।
वनजन्य सम्पदाको सदुपयोग
कुनै समय ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिन्थो, वन आफैंमा धन भने होइन । वनबाट उत्पादित काष्ठ र गैरकाष्ठ सम्पदाका कारण वनलाई धन भनिएको हो । नेपालमा झन्डै १ हजार प्रजातिका जडीबुटी पाइने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्, तीमध्ये करिब २ सय प्रजातिका जडीबुटीमात्रै व्यावसायिक प्रयोजनमा आउन सकेको छ । पन्तजली योगपीठका आयुर्वेद अध्येता आचार्य बालकृष्णले त ३ सयभन्दा अधिक प्रजातिका जडीबुटी नेपालमा मात्र पाइने ठोकुवा गरेका छन् ।
शुक्रवार, श्रावण १०, २०७६
मौद्रिक नीति र तरलता संकट
केन्द्रीय बैंकले बुधबार चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले निराशा र वित्तीय क्षेत्रले सकारात्मक अर्थात् समग्रमा मिश्रित धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति आउनुअघि बिग मर्जरको होहल्ला मच्चाएर आतंक सिर्जना गरेको केन्द्रीय बैंकले अन्ततः मर्जरका लागि प्रोत्साहितमात्र गरेर यो विषयलाई सहज अवतरण गराएको छ । यसलाई भने मौद्रिक नीतिकै सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । तर, मर्जरका लागि दिइएका सुविधाका आधारमा थप मर्जरको सम्भावना त्यति देखिँदैन भने मर्जर भइहालेमा त्यसबाट कतिपय क्षेत्रमा नकारात्मक परिणामसमेत देखिन सक्छ ।
वातावरणीय सन्तुलित विकासमा जोड
नेपालका लागि मनसुन खुुुसीसँगै चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । नेपालमा औसतमा जुन १० तारिखका दिन मनसुन भित्रिनुपर्ने भए पनि यस वर्ष १० दिन ढिलो गरी भित्रियो र यसरी भित्रिएको मनसुन पनि स्वाभाविक रहेन, जसका कारण देशका मध्य तथा पूर्वी तराई क्षेत्रमा अत्याधिक पानी प¥यो भने पश्चिमी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पानी नै परेन ।
अहिले संघीय तहमा मात्र नभई प्रदेशस्तरमा पनि कृषि मन्त्रालयहरू सक्रिय रहेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारले कृषि तथा पशुपालनको केही समययता नेपालमा ‘मिल्क होलिडे’को शब्द सुन्न छोडिएको छ । यो भनेको बढी उत्पादन हुने समयमा दूध डेरीहरूले किसानको दूध नकिन्ने अवस्था हो । भदौदेखि माघसम्म दूधको बढी उत्पादन हुने समयावधिलाई ‘फ्लड सिजन’ भनिन्छ भने साउनदेखि फागुनसम्म उत्पादन कम हुने समयलाई ‘लिन सिजन’ भनिन्छ ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियानसहित आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढेको सरकारका एकपछि अर्को निर्णय विवादास्पद बन्दै जाँदा मूल अभियान नै ओझेलमा परेको छ । जेठ १५ मा ल्याइएको बजेट मूलतः आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगा बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रावधानका कारण कार्यान्वयन नै नहुने सम्भावनाको बाटोमा अघि बढेको छ । यसको मूल कारण भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सुसम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु नै हो ।
भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित ११ महिनाको आर्थिक समीक्षाअनुसार भारतमा भन्दा नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढी छ । नेपालको उपभोक्ता बजार अराजक छ भने पनि हुन्छ । सानातिना कारण देखाउनेबित्तिकै बजारमा कृत्रिम अभाव, जमाखोरी गर्ने, जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको छ । केही समयअघि भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच गरेर मात्र नेपालमा भिœयाउन पाउने व्यवस्था गरिएपछि तरकारी बजारका बिचौलियाहरूले १ सय ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरे । भारतीय तरकारीको आपूर्ति कम भएको कारणले मूल्य बढेको उनीहरूको तर्क थियो ।